Vaovao - 2021CMEF: Kangyuan manatsara ny kalitaon'ny fiainana amin'ny siansa sy ny teknolojia
Tamin'ny 13 Mey 2021, natao tao amin'ny Foibem-pifanarahana sy fampirantiana nasionaly Shanghai ny foibe fampirantiana iraisam-pirenena iraisam-pirenena (CMEF) faha-84 mitondra ny lohahevitra "teknolojia vaovao, ho avy hendry". Miaraka amin'ny olona marobe manatrika ny fampirantiana, ny hakanton'ilay hetsika dia nihoatra ny fotoana rehetra teo aloha.
Amin'ity fampirantiana ity, Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. dia mitondra vokatra vaovao marobe, toy ny catheter silikôla miaraka amina balaonina, catheter fôlyy sôlôjia misy hafanana, fantsona gastrostomy silikaly ary fantsom-piterotomy silika, izay nahasarika ny sain'ny olona maro .
Niorina tamin'ny taona 2005, Kangyuan dia manarona faritra manodidina ny 20 000m² miaraka amin'ny sandan'ny vokatra mihoatra ny 100 tapitrisa yuan isan-taona. Izy io dia manana tsipika famokarana mandeha ho azy iray manontolo, efitrano madio 4000m2 misy kilasy 100.000 ary laboratoara 100000.000 kilasy miaraka amin'ny fanaraha-maso amin'ny tanana mba hiantohana ny fiarovana sy ny kalitaon'ny vokatra. Rehefa afaka folo taona mahery ny fampandrosoana tsy tapaka, Kangyuan dia lasa mpamokatra fanafody famokarana fanafody marobe any Sina Atsinanana.
Miaraka amin'ny fahatsapana andraikitra lehibe amin'ny fiaraha-monina
Kangyuan dia manolo-tena hanatsara ny kalitaon'ny fikarakarana sy ny fiainana ho an'ireo marary
Manome famatsiam-bola ho an'ny besinimaro ho an'ny besinimaro
2021CMEF dia hifarana afaka 2 andro
Ny laharan'ny trano fivarotanay dia 8.1ZA39